Sein Gay Har | Events & Promotion
LATEST EVENTS Buy Sport Get "Handless Bicycle" / @ Sein Gay Har(Pyay Road),Hledan Centre,Parami Centre,China Town,Bo Aung Aung Kyaw Centre While Stocks Last! Sein Gay Harဆိုင်ခွဲများရှိ Sport Counter တွင် ကျပ်ငါးသိန်းဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူသူများအတွက် Handless Bicycle တစ်စီးလက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ..
MORE "BMW Car ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲ ?" 16th March ~ 15th May 2013/ @ SEin Gay Har All Branches
စိန်ဂေဟာဆိုင်ခွဲအားလုံးတွင် THINGYAN Lucky Draw Program အနေဖြင့် BMW Car(Grand Prize)1စီး, i Phone (5)လုံး၊ GALAXY NOTE II (5)လုံး၊ i Pad (3)လုံး၊ hTC Smart Phone (5)လုံး တို့ကို ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေ� ..
MORE Health & "Thingyan Shirt Festival" 5th-9th,Aprial,2013 @ Sein Gay Har All Branches စိန်ဂေဟာဆိုင်ခွဲများတွင် သင်္ကြန်အကြို Branded Shirt အရောင်းပွဲတော်ကို ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့မှ(၉)ရက်နေ့ထိ Arrow,GQ,Hazard,Giffini,Daniel Lewis,JOBB,Austino,Crocodile,Goldlion,Pierre Cardin,John Langford,Manchester,Alain Delon,Va ..
MORE Thingyan Last Minutes "Travelling Needs Sale!"
5th to 9th, April,2013 @ Sein Gay Har Super Centre(Pyay Road)
Sein Gay Har(Pyay Road)တွင် သင်္ကြန်ခရီးထွက်မည့်သူများအတွက်အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် "Travelling Needs Sale!" အရောင်းပွဲကို 5th ~ 9th,April,2013အတွင်းကျပ်လေးသောင်ဖိုးဝယ်သူများအတ ..
MORE MEGA THINGYAN BARGAIN "သင်္ကြန်အထူးသက်သာမည့်အခွင့်အရေး"
5th ~ 12th,April,2013/ @ Sein Gay Har (Pyay Road) စိန်ဂေဟာပြည်လမ်းစင်တာတွင်သင်္ကြန်အထူးသက်သာမည့်အခွင့်အရေးအဖြစ် Jeans Pants,T-Shirt,Walking Shoes,ဦးထုပ်မျိုးစုံ၊
MORE Copyright © Sein Gay Har International Shopping Centre